Mutungamiri weNyika, VaEmmerson Mnangagwa, Vanoti Vanhu Vachabayiwa Nhomba yeCovid-19 Pasina Muripo
Kukadzi 04, 2021
Hurumende inoti nhomba yeCovid-19 ichange ichipiwa munhu wese pachena senzira yekuchengetedza hupenyu hwemunhu wese ari munyika.
Mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vati kunyange hazvo huwandu hwevari kurwara nechirwere cheCovid-19 hwadzikira, zvakakosha kuti nyika irambe ichitora matanho ekudzikisa huwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi kuburikidza nekubaya veruzhinji nhomba.
VaMnangagwa vati hurumende yavo ichatenga nhomba iyi yopa vanhu pachena.
VaMnangagwa vatendawo vemabhizimusi nenyika yeChina iyo varumbidza nerubatsirwo rwairi kupa Zimbabwe. VaMnangagwa vati Zimbabwe ichabatsirwa pachena neChina nenhomba zviuru mazana maviri.
VaMnangagwa vatendawo vashandi mubazi rezvehutano vachiti vari kubata basa guru vakakurudzira veruzhinji kuti varambe vachizvidzivirira kuchirwere cheCovid-19.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatzwayo, vati hurumende inofanirwa kubuda pachena kuti ichafambisa seyi hurongwa hwekubaya vanhu nhomba uye kuti nhomba idzi dzinenge dziri dzimishonga ipi, uye yakagadzirwa nemakambani api.
Zimbabwe ichawana nhomba kuburikidza neAfrican Union iyo ichapihwa vanoshaya vanosvika mamiriyoni matatu.
VaMnangagwa vakazivisawo kuti Zimbabwe ichashandisa mari inoita zana remamiriyoni emadhora ichitenga nhomba.
Asi nyaya iyi iri kunetsa sezvo paramende iri kuti inofanirwa kusumwa nezvedanho iri, yoritambira zviri pamutemo sezvo mapazi ehurumende asingabvumidzwe kushandisa mari isina kutambirwa zviri pamutemo neparamende.
VaMnangagwa vatorawo mukana uyu kukuridzira vemabhizimusi kuti vaone kuti mitengo yezvinhu haikwiri vakashorawo kuvakwa kwedzimba mumatoro.
Vatiwo vanoda kuti sangano reEnvironmental Management Agency rizivise kuti hapana achabvumirwa kuvaka mumatoro enyika.
Mashoko aVa Mnangagwa ekuwaniswa kwenhomba pachena aya ari kutsigirwawo negurukota rezvehutano, uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaConstantino Chiwenga, avo vataura pahurongwa hwekucherechedza zuva regomarara psi rose vachiti hurumende inokoshesa hupenyu hwemunhu wese nekudaro nhomba yeCovid-19 ichange ichipihwa munhu wese pasina muripo
VaChiwenga vatiwo hurumende iri kuisa hurongwa hwekuti chive chiga chekuti vanhu vanenge vasvika pazera rinozivikanwa kuti vanenge vave panjodzi dzekubatira gomarara, vange vachiongororwa.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushoropodza hurumende nekusabuda pachena nehwaro hwekubata denda reCovid-19.